Moet & Chandon Grand Vintage Rose 2009 ~ ICT.com.mm
HomeMoet & Chandon Grand Vintage Rose 2009
Moet & Chandon Grand Vintage Rose 2009
Moët & Chandon Grand Vintage Rose Chardonnay: 35% Pinot Noir: 42% Pinot Meunier: 23% Alcohol: 12.5% Brut/2009 Espernay, Champagne/ France ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Grand Vintage Rose (2009) ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့... [Learn more]
Brand: MOET & CHANDONFilter by: FWM, Wine
Pinot Meunier: 23%
Espernay, Champagne/ France
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Grand Vintage Rose (2009) ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Reims မြို့ Champagne ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Blend ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Noir စပျစ် (42%) ၊ ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး အဖြူရောင် ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ် (35%) ၊ နက်မှောင်တဲ့အခွံနဲ့ Sparkling ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Meunier စပျစ် (23%) တို့ဖြင့် ရောစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု ၁၂.၅% ရှိတဲ့ Brut/2009 (Sparkling - Berries and Cream) ရှန်ပိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Rosé သို့မဟုတ် Pink Champagne လို့ လူသိများတဲ့ ရှန်ပိန်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပင်လယ်စာကမာ၊ ငါးကြီးငါးဥဆားနယ်၊ ပုစွန်တုပ်နဲ့ ငါးအစိမ်းဟင်းလျာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပြင်သစ်ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။
Coral pink with glint of orange, fine and persistent bubbles. Fresh notes of pink grapefruit, blood orange, cherries and fishing with more vegetal notes or wild strawberries. Soft and silky texture on the palate.
Beautifully pair with scallops, caviar, smoked salmon, lobster, and marinated raw fish.